င ဝန် န ဒီ: April 2013
စာပေဟောပြောပွဲ နောက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သလို
ပြက္ခဒိန် လည်း ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းပုံ နဲ့ 
ဂျပန်မှာ စာပေဟောပြောပွဲသွားတော့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ နားထောင်ခဲ့ရတာနဲ့ကွာသလို ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုရယ်
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းကြီးမှာ မျိုးဆက်သစ် တွေ စာပေဟောပြောပွဲ ကို နားထောင် နိူင်သော နေ့ကို ကြားချင် နေမိပါရဲ့ 
နိူင်ငံတကာ ဖုန်းဈေး ကို အမှီလိုက် မည့် မြန်မာ CDMA800 ဒီနေ့ စသုံးလို့ ရပြီ
တကယ်တော့ တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းမဟုတ်ပါ ပုံမှန် ဖုန်းဈေးပါ
တနေ့အဲလို ပုံစံ ဖြစ်လာလျှင် မြန်ပြည် အမှန်တကယ် တိုးတတ်ပြီး
မြန်မာ နှစ်သစ်ကူး စာပေဟောပြောပွဲ ဂျပန်
အခမ်းအနား ကို ၆ နာရီ ၁၅မိနစ် မှာစတင်
ကမ္ဘာမကြေ သီချင်း ဆို ဖွင့်လှစ်
ဆရာမ ဂျူး စတင်ဟောပြော
ဤခရီးနီးသလား ကို ၇ နာရီ ၅၀မိနစ် မှာ စတင်ဟောပြော
၉ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် ဟောပြောပြီး၏
Posted by ငဝန်နဒီ at 5:48 PM No comments:
ဖုန်း. ဖုံး. ဘုန်း.
ဖုန်း. ကတော့ ဆက်သွယ်ရတာလွယ်ကူစေတဲ့ အရာ ဆိုတော့ မြန်ပြည်သူပြည်သားတိုင်း လိုတိုင်း ရနိူင်ကြပါစေ။
ဖုံး. ကတော့ လိုအပ်ချက် မပြည့်မှီတော့ ဖုံးဖိပြီး ကိုယ်ရဖို့ လုပ်တာတွေ ရှိနေရင်တော့ လူအများအသိခံဖို့ မဖြစ်တော့ ဖုံး ထားသူတွေရှိနေမှာပါ။
ဘုန်း. ကတော့ ဖုန်းရဖို့အတွက် ဖုံးထားသူတွေ ဆီကရမယ် ပြောပြီး ငွေတွေ ဘုန်းမယ့်သူတွေ ပေါ်လာတော့မှာဆိုတော့. ဘုန်းသူတွေ ရှိနေမှာပါ။
ဖုန်းအတွက် နဲ့ဖုံး သူတွေ နဲ့ ဝေး လို့ ဘုန်းသူတွေ ကို ရှောင် နိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:37 AM No comments:
1996 မတိုင်ခင် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောခဲ့သော
အခုတော့ ဂျပန်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် မှာ နားထောင်ခဲ့ရတာ
၁၇ နှစ်ကြာ ခဲ့ပြီ
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ရဲ့နောက်ဆုံး စာပေဟောပြောပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ ဟောပြောပွဲ မှာပြောဟောခဲ့တဲ့
နောက်ပိုင်း ဟောပြောပွဲ ရှိကို မရှိတော့တာ
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:16 PM No comments:
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ နှစ်သစ် ကို ကြိုဆိုလျက်
မြန်မာနှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြှေ့ ကြပါစေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေ နှင့်တွေ့ ဆုံပွဲ မေးဖြေ စဆုံး ဗီဒီယို ဖိုင်
Zayyar20283 မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:13 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံ
မြန်မာနှစ်သစ် အကူးသင်္ကြန် အကြို ကြိုဆိုပါတယ်
ဂျပန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် ကတည်းက သင်္ကြန် လုပ်ပြီးသွားတော့ မြန်ပြည်က သင်္ကြန် သတင်းတွေပဲ ကြည့်ရတော့မှာပေါ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:40 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်သို့ ဝင်ရောက်လာစဉ်
မြန်ပြည်သားတွေ သွာကြိုသူတွေ မတွေ့ ရလို့တီဗွီက့ လာတာ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တင်လိုက်တာပါ
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:10 PM No comments:
ဆက်သွယ်ရေးနှင်းသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ မိုဘိုင်းဖုန်းများ ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်
ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန်း များ ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်
၁။၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့ တွင် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ များ၏ အစီအစဉ် ဖြင့် စတင်ရောင်းချပါမည်။
၂။ရောင်းချမည့်ဈေးနှုန်းမှာ တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုခ(၃၀၀)ကျပ် ကြိုတင်ထည့်သွင်းပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း SIM Card တစ်ခုအတွက် (၁၅၀၀ိ/)ကျပ်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။လစဉ် မိုဘိုင်းဖုန်း(၃၅၀၀၀)ကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသို့ခွဲဝေရောင်းချသွားပါမည်။
၃။စတင်ရောင်းချမည့် မိုဘိုင်းဖုန်း အမျိုးအစားမှာ CDMA-800 MHz စနစ် မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြစ်ပြီး မြန်မာနိူင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး သာမက နိူင်ငံရပ်ခြားသို့ ပါ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိူင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လ များတွင် GSM(2.27G), WCDMA(3G) မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ဆက်လက်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းချမည့် အစီအစဉ် ကို ထပ်မံကြေညာ ပါမည်။
၄။CDMA-800 MHz စနစ် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းမရှိသေးသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး များတွင် WCDMA 3G ဖုန်းများကို နှုန်းထားတူ (၁၅၀၀ိ/-) ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပြည်သူများ သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိူင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် ဖုန်းကဒ် ဝယ်ယူထားသော နေ့ မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွင်း တယ်လီဖုန်း SIM Card တွင် မူလထည့်သွင်း ပေးထားသည့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခ (၃၀၀)ကျပ် မကုန်မှီ တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲသူသည် အနည်းဆုံး (၅၀၀၀) ကျပ် တန် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ် ဖြင့်ငွေဖြည့်သုံးစွဲ ရမည်။ ဖုန်းကဒ်အား အခြားသူ တစ်ဦးဦးသို့လက်ဆင့်ကမ်း ရောင်းချခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် (၁၅)ရက်အတွင်း အသုံးပြုခြင်း မရှိပါက အဆိုပါဖုန်းကဒ်သည် အလိုအလျောက် လိုင်းပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုး စက်တပ်ဆင်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခများမှ ပြန်လည်စုစည်း ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဤတန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန်းများကို လစဉ် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြင့် ပြောဆိုခ ကျပ် (၂၅၀၀) အနည်းဆုံး သုံးစွဲရန် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ နှစ်လပြည့်သော်လည်း ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်မှ (၅၀၀၀)ကျပ် ကိုအပြည့်မသုံးစွဲပါက အလိုအလျောက် ကျပ်(၅၀၀၀) ပြည့်သည်အထိ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တယ်လီဖုန်းSIM Card တွင်ဖြည့်သွင်းထားသောငွေကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၁၅)ရက်အတွင်း ငွေထပ်မံ ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိပါက အဆိုပါ ဖုန်းကဒ်သည် အလိုအလျောက် လိုင်းပိတ် သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့်အတူ အခြားလိုင်စင်ရ အော်ပရေတာများမှ နိူင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ပြည်သူများ ဆက်သွယ်သုံးစွဲရန် လုံလောက်သော မိုဘိုင်းဖုန်း များကို တိုးချဲ့ တပ်ဆင်ပြီးစီးပါက မည်သည့် ကန့် သတ်ချက်မျှ မရှိတော့ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။
ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ်အမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် နောက်...
နိူင်ငံတကာ ဖုန်းဈေး ကို အမှီလိုက် မည့် မြန်မာ CDM...
1996 မတိုင်ခင် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောခဲ့ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေ နှင့်တွေ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေ နဲ့ တွေ့ ဆ...
ဆက်သွယ်ရေးနှင်းသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ြ...